… जसले नेपालकाे प्रबिधिकाे क्षेत्रमा भविष्य देखे ! :Nepal Bisesh
… जसले नेपालकाे प्रबिधिकाे क्षेत्रमा भविष्य देखे !
April 19, 20194:10 pm Nepalbisesh
काठमाडौं- झापाका एक युवा जाे नेपालमा रहेर पनि सुन्दर भविष्यकाे निर्माणमा छन्। सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि बिदेश नै जानु पर्दछ भन्ने आधुनिक युवाहरुकाे कथित बिचारधाराकाे ठिक विपरित छ उनकाे दैनिकी।
अमर भट्टराई पेशा ले आईटी स‌ंस्था ‘अल्ट्राबाइट इन्टरनेसनल प्रा‍.लि‍.’ का सञ्चालक हुन्। अध्ययनका हिसावले बिदेशिएका भए अनेकन सम्भावना थिए उनिसँग तर आज उनि आफ्नै जन्म भूमिमा केही सूर कस्दै छन्।
आफ्नो क्षमतालाई स्वदेशमै प्रयोग गरेर आफू पनि अगाडि बढ्ने अठोट छ भट्टराइमा ।
स्वदेशमै रमाउने चाहा पाेख्दै भन्छन् ‘आफू मात्र नभई अरुलाई पनि बनाउनुपर्छ भन्ने साेच सानै बाट थियाे र नेपालमै केही गर्ने साेचले काम सुरु गरेकाे हुँ।’, उनले थपे, ‘ र पेशा गर्दा आफ्नाे हितसँगै अरुको ब्यबसायिक हितलाई पनि सँगै जोडेर हेरेँ। आफुसँग भएकाे सिपकाे सदुपयाेग हुने हिसावले सन् २०१४ मा अल्ट्राबाइट इन्टरनेशनल प्रालि स्थापना गरे। आज यही सस्था मेराे जीवनकाे आधार बनेकाे छ र म सँगै अन्य ४ सय बढि पेशा ब्यबसायि जाेडिनु भएकाे छ। यसैमा सन्तुस्ट छु।
भट्टराइले भनेजस्तै उनले हालसम्म करिब ४ सयवटा वेबसाइट, सफ्टवेर तथा विभिन्न एपहरु निर्माण गरिसकेका छन् ।
‘लामोसमयसम्म व्यापार व्यवसाय गरेका उद्यमीहरु आम रुपमा स्थापित हुन सकिरहनुभएको थिएन तर यो पाँच वर्षमा हामीले उहाँहरुलाई आईटीसँग जोड्ने काम गर्याैं, अहिले उहाँहरुको परिचय मात्रै झाँगिएको छैन, व्यापार, बिजनेश पनि फैलिँदै गएको छ र मलाइ मन गरे देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ आशा पनि पलाएकाे छ।’
भट्टराईले आईटी अफिसमा रहेर आफू मात्र स्वराेजगार बनेका छैनन् अन्य दर्जन बढि युवाहरुलाई समेत राेजगारकाे अवसर प्रदान गरेका छन्।
यससँगै उनले सामाजिक सञ्जालमा अमूल्य समय र सृजनशिलता पाेख्नेहरुका लागि पनि नयाँ अवसर प्रदान गर्दै आएका छन्। जस अन्तर्गत उनले अल्ट्राबाइटको भगिनी संस्थाका रुपमा पेजअटर डटकम www.pageutter.com संचालनमा ल्याएका हुन्। जहाँ युवाहरुले आफ्ना लेख, रचना तथा सृजनशिलतालाई फुर्सदकाे समयम लेखक स्वयम्ले प्रकाशन गर्न सक्ने छन्।
यसलाई भट्टराई नेपालमा इन्टरनेटकाे प्रयाेगकर्ताहरुकाे बढ्दाे दर र आफ्ना लेख रचना प्रसारण, प्रकाशनकाे अवशरबाट बञ्चित युवामाझ नयाँ प्ल्याटफर्मका रुपमा ब्याख्या गर्दछन्। जाे काेहीका सृजनाहरु प्रकाशित हुनु अघि नै पाठकका सल्लाह, सुझाव र प्रतिकृया पछि थप मजबुद बिषयलाई बजारमा पठाउन सक्ने सुविधासहितको यो वेभसाइट नेपाली बजारमा नयाँ हुनसक्ने भट्टराइको दावी छ।
बिशेष गरि नेपाली साहित्य तथा खाेजअनुसन्धान र लेखकहरुमाझ नयाँ अवधारणाका साथ अघ बढेका भट्टराई यसै वेबसाइटमार्फत अवसर सृजना गर्न सकिन्छ भनेर प्रमाणित गर्नमा समेत अग्रसर देखिन्छन्। निकट भविष्यमा नै प्रबिधिकाे प्रयाेगले भाैगाेलिक सिमालाई परास्त गर्दै देश विदेशमा रहेका सबै पाठकहरुकाे राेजाईमा www.pageutter.com पर्न सक्छ भन्ने बिश्वास भट्टराईमा रहेकाे छ।